काठमाण्डौं खाल्डोका अचेतन मन हावी भएका मानिसहरूमा खासै चेतना भएको पाइँदैन । यदि यहाँका मानिसका मनमा चेतना भइदिएको भए यहाँका नदीनाला, पोखरी, धारा, पाटीपौवा आदिमा फोहर थुप्रिने नै थिएन । अचेतन मन बोकेको व्यक्तिले कुनै सार्वजनिक काम गर्दै गर्दैन र गरिहाले पनि त्यो देखावटी मात्र हुन्छ ।
बागमती सफाइको सयौं हप्तामा निकै ठूलो चुरीफुरी देखियो । गुह्येश्वरी देखि चोभार सम्मको माखे साङ्ग्लो, अनि सामाजिक संजालमा सबैले आफू सहभागी भएको हुँ भन्ने जष्टिफिकेसनका लागि फोटो पोष्ट गरेका । जसका कारण सामाजिक संजालमा पनि अर्को माखे साङ्ग्लो झण्डैं नबनेको अवस्था । सय हप्ताको अभियान चलाउनका लागि झण्डैं दुईबर्षको समय लाग्छ । दुईबर्ष सम्म अथक प्रयत्न गर्ने हातहरु निश्चयनै श्रद्धा र आदरका पात्र हुन् । यत्रो अभियानलाई विना स्वार्थ यति लामो समयसम्म निरन्तरता दिइरहन सक्नु पनि चानचुने कुरा पक्कै होइन । तर बागमती अपेक्षाकृत सुधार आउन सकेको देखिँदैन ।
बागमती नदी काठमाडौंकी धरोहर हुन् । बागमतीको सफाइले नै यहाँका मानिसहरूको सभ्यतालाई मापन गर्दछ । हो धार्मिक रुपमा पनि यिनको ठूलो महिमा रहेको कुरा गर्ने गरिन्छ । काठमाण्डौंको समग्र सभ्यता नै बागमती सभ्यताको नामले चिनिन्छ । मानव सभ्यताको कुरा गर्ने हो भने संसारका ऐतिहासिक एवं वर्तमान सभ्यताहरू पनि नदी किनार र जलासयमा आधारित भएको पाइन्छ । मेसोपोटामियाको सभ्यता युफ्रेड्स र टिग्रिज नदीहरूमा केन्द्रित थियो । मिश्रको सभ्यता नाइल नदीमा केन्द्रित थियो । वर्तमान समयमा पनि बहुसंख्यक सहरहरू नदी वा जलासयकै छेऊछाऊमा बनेको देखिन आउँछ । कारण पानी जीवन हो । पानीबिना जीवनको कल्पना सम्म पनि गर्न सकिन्न । पृथ्वीको भूबनोटलाई हेर्ने हो भने यसमा कूल भूभागको झण्डैं ७० प्रतिशत भाग पानीले ढाकिएको छ । सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको संरचना मानवलाई केन्द्रविन्दु वा आदर्श मानेर निर्धारण गरिएकाले मानवमा पनि यही अनुपातमा पानीको मात्रा अवस्थित रहेको हुन्छ ।
पानीबिना जीवनको कल्पना नै गर्न नसकिने भएपनि पानीप्रति काठमाण्डौं खाल्डोका अचेतन मन हावी भएका मानिसहरूमा खासै चेतना भएको पाइँदैन । यदि यहाँका मानिसका मनमा चेतना भइदिएको भए यहाँका नदीनाला, पोखरी, धारा, पाटीपौवा आदिमा फोहर थुप्रिने नै थिएन । अचेतन मन बोकेको व्यक्तिले कुनै सार्वजनिक काम गर्दै गर्दैन र गरिहाले पनि त्यो देखावटी मात्र हुन्छ । बागमती सफाइ पनि कतै त्यस्तै उपमा दिन मिल्ने कार्य नहोस् । बागमती सफाइको अभियान बनोस् न कि अभिनय ।
बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा काठमाण्डौंका हरेकजसो घर, अफिस, शिक्षण संस्था, अस्पताल, आदि सबै ठाउँको ढल अनवरत रुपमा मिसिइरहन्छन् । उक्त अभियानमा लागेका व्यक्तिहरूले दिन दिनै प्रयोग गर्ने गरेको ट्वाइलेट र अन्य रछ्यान जन्य पदार्थ कहाँ पठाइन्छ ? के त्यसको बोझ बागमतीले बोक्नु परेको छैन र ? सोझो रुपमा हेर्दा सरकारका मुख्य सचिव देखि अन्य विभिन्न पदधाकारी व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको, नेपाल टेलिकमले शुक्रबार दिउसो हरेकको मोवाइलको इनबक्समा म्यासेज पठाउने गरेको देख्दा निकै लगानी भएको बुझिन्छ । तर लगानी अनुसारको प्रतिफल हासिल भएको छ भन्ने कुरा कम्तिमा इमान्दार मनले भन्न सक्तैन नै होला । सरकारका मुख्य सचिव लगायत केही नागरिक समाजका अगुवा भन्नेहरुले पशुपति क्षेत्रमा नुहाउन लायक भइसकेको भान पार्नका लागि बाहिरबाटै पानी लगेरै भएपनि पाशुपत क्षेत्रमा बागमतीमा नुहाउने नाटक त केही समय अघि नै गरेका हुन् ।
बागमती सफाइका लागि यहाँ दुई पक्षको भूमिका विशेष रहेको हुन्छ । एक सरकारी पक्ष हो भने अर्को पक्ष जनता । यहाँ न त सरकार जिम्मेवार छ न जनता नै जिम्मेवार छन् । दुवैको लापरवाही पाइला पाइलामा छर्लङ्गै देख्न सकिन्छ । यहाँ भ्रष्टाचार गरेर राजनीतिक साखः जोगाउनकै लागि सरकार बन्दछन् र सरकारमा जान लुछाचुँडी चल्छ । कर्मचारीहरूको त सहरमा राम्रो घर बनाउने, राम्रो कार चढ्ने, शानले चल्ने ड्रिम नै हुन्छ । त्यो ड्रिम राज्य र जनातालाई नलुटी पूरा हुँदै हुँदैन । यहाँ जनतालाई पनि जायज नाजायज सबैचीज घरभित्र हुल्न र विकारका वस्तु घरबाहिर निकाल्न मात्र पाए पुग्छ, कसरी ठेगान लगाउने भन्ने के को चिन्ता ।।
यदि हामीले मात्र बागमती सफाइको एजेन्डा बोकेर हिँड्ने हो भने यो कहिल्यै पनि सफल हुने छैन । यससँग जोडिएका अनेकन विषयहरूलाई पनि समेट्नु अति आवश्यक हुन्छ । सबै भन्दा प्राइम कुरा भनेको मनस्थिति नै हो । मनस्थितिको परिवर्तन बिना कुनैपनि परिवर्तन, त्यो पनि सकारात्मक, सम्भव नै छैन । यो हदबाट आगाडि बढ्न सकिन्छ भने अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ । जे होस् मन शुद्ध भयो भने सबैकुरा शुद्ध हुन्छ । सरसफाइ गर्नु राम्रो काम हो । तर त्यो भन्दा पनि राम्रो काम हो फोहर नै नगर्नु । यसकालागि चाहिन्छ जिम्मेवार सरकार र कर्मचारी तन्त्र अनि जनता । व्यक्तिको सभ्यता नै समाज, राष्ट्र र संसारको सभ्यता हो । यहाँनिर पाठकवृन्दलाई लाग्न सक्छ कि यो आध्यात्मिक चिन्तनमा बागमती सफाइको कुरा कसरी आयो ? यो यसकारण कि आध्यात्मिक स्तरलाई नाप्ने नापो पनि सभ्यता नै हो र सभ्यता भनेको सफाइ हो ।